XOG: Madaxweynaha Puntland oo dhawaan magacaabaya Guddi aad loo sugayo & Xogo ka soo baxaya cida ka mid noqonaysa. – Puntlandtimes
XOG: Madaxweynaha Puntland oo dhawaan magacaabaya Guddi aad loo sugayo & Xogo ka soo baxaya cida ka mid noqonaysa.
November 2, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, uu dhawaan magacaabi doono guddiga Xalinta Khilaafaadka iyo Ansixinta xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland, kaas oo ay si weyn u sugayaan musharaxiinta iyo dadka raadinaya ka mid noqoshada baarlamaanka soo socda.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in Madaxweynaha Puntland ee waqtigu ka dhamaanayo Cabdiweli Maxamed Cali, uu hadda kusii jeedo gobalka gobalka Mudug, wuxuuna halkaas kula kulmi doonaa waxgaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, kana wadahadli doonaan arrimaha doorashooyinka.
Warar hoose ayaa sheegaya in 25-ka bisha November ka hor la magacaabi doono guddigan oo ay sugayaan shacabka oo dhan, ahna mid kala saaraya xubnaha isku haysta kuraasta baarlamaanka Puntland oo hadda waqtigoodii dhamaaday.
Musharaxiinta iyo Siyaasiinta gobalka ayaa ka walaacsan xubnaha guddigan, waxayna horey musharaxiintu uga digeen in ay xubnahaas noqdaan kuwa si gaar ah Madaxweynuhu ku keensado, loona baahan yahay in ay noqdaan kuwa lagu xushay karti iyo hufnaan lagu yaqaano.
Guddigan ayaa loolan adag loogu jiraa xubnaha ka mid noqonaya, waxaana tiradda guud ee xubnahan ay noqon doontaa 7 xubnood iyo xogheyn guud, waxaana meelaha ugu badan ee uu ka dhasho is haysiga Musharaxiinta iyo Madaxweynaha markaas xilka haya.
Puntland ayaa hadda ku jirta labadii bilood ee ugu dambeysay doorashada, waxaana muuqata in ay jirto habacsanaan iyo kalsooni la’aan ay qabaan musharaxiinta oo ku wajahan tartanka doorashada, iyadoo uu aad uga duwan tahay doorashadii horey u dhacday 2014-kii oo ay loolan adag ku galeen musharaxiinta.
Musharaxiinta tartamaya ayaa hadda gudaha dalka kusoo wada jeeda, waxaana muuqata in aysan wali mandiqada imaanin musharaxiinta ugu saameynta badan ee ay welwelka qabto Madaxtooyada Puntlandm, gaar ahaana qaarkood ay maqan yihiin.
Ugu horeyn anigu muwadin u dhashay puntland ayaan ahay. Markaas ka dhib ayaan ahay muwaadin somaaimaliyeed. Waa hadii somalinimadaan afka kaliya lagu xuso ay dhab noqoto.
Ma aqbalayo , mana taageerayo , mana u hiilinayo shaqsi ay wadani nimadiisu mugdi iyo madmadoow ku jidho loolaa uu noqdo mid dhiig iyo dhaxal’ba wadaagno